Wasiirka Caafimadka oo booqatay dhaawacyadii la dhigay Cusbitaalka Digfeer | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Caafimadka oo booqatay dhaawacyadii la dhigay Cusbitaalka Digfeer
Wasiirka Caafimadka oo booqatay dhaawacyadii la dhigay Cusbitaalka Digfeer
Wasiir Fowsiya Abuukar Nuur oo ay wehliyaan qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda ayaa booqday Cusbitaalka Digfeer oo la dhigay 15 ruux oo ka mid ah dadkii ku dhaawac may qaraxii ka dhacay agagaarka Wadada Shaqaalaha iyadoo mid mid u gacan qaaday lana wadaagta xanuunka Soo gaaray.
Qaar ka mid ah Dhaqaatiirta Cusbitaalka ayaa warbixin kooban ka siiyay sida ay tahay xaladda dadka hadda yaalla cusbitaalka oo gaaraya todobo ruux oo dhaawacyo daran qaba.
Wasiirka Caafimaadka Dowladda federaalka Soomaaliya Dr Fowsiyo Abuukar ayaa sheegtay in dhaqaatiirtu u sheeegeen in cusbitaalka la keenay 15 oo mid ka mid ah intii loo fidinayay Daryeel caafimaad uu geeriyooday halka todobo kale oo helay adeeg caafimaad dib ay ugu laabteen guryahoodii todobo kale oo xaaladdoodu daran tahayna lala tacaalayo.
“Dhaqaatiirta Cusbitaalka aad ayay u mahadsan yihiin sida ay ugu dadaalayaan Daweynta Dhaawacyada daran Allaha unaxariisto intii dhimatay inta dhaawacanna Allaha Caafimaad Siiyo” Sidaasi waxaa yiri wasiirka Caafimaadka Dowladda Soomaaliya Dr Fowsiya Abuukar.
Previous articleWasiirka Warfaafinta Dowladda Soomaaliya oo Sharraxaad ka bixiyay Shirweynaha London Dhawaan ka dhici doona
Next articleWasiir ku xigeenka Wasaaradda kalluumeysiga oo kormeeray Xaafadda kalluunka Deg Waabari